आफु बाहेकको सरकार बनाएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको ठाडो चुनौती – Hamro Suchana
May 21, 2021 प्रधान सम्पादक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीहरूलाई वैकल्पिक सरकार बनाउन चुनौती दिएका छन् । वैकल्पिक सरकार बने आफू प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘वैकल्पिक सरकार बनाए भयो, वैकल्पिक सरकार बने म स्वागत गर्छु,’ बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस् मेरो रचनात्मक सहयोग रहने छ ।’
ओलीले आफूले आजै कांग्रेस सभापति शेबहादुर देउवालाई फोन गरेर राष्ट्रिय सरकार मिलेर बनाउन आग्रह गरेको बताए । ‘आज बिहान मैले शेरबरहादुर देउवालाई फोन गरेर भनेँ- तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस् । होइन, भने आउनुहोस् मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रियस सरकार बनाउँ न त!’ उनले भने ।
ओलीले आफूलाई सर्मथन गरे संसद विघटन नहुने समेत बताए ।
‘सक्नुहुन्न भने मलाई सर्मथन गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘कसले विघटन गर्न खोज्यो संसद ? मलाई सर्मथन गर्नुहोस् । महामारीका बेला सबै सरकारमा सहभागी होऔं । यस्तो बेलामा हामी सबै मिलेर कोभिड-१९ विरुद्ध लडौँ । तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्, रचनात्मक भूमिका हाम्रो हुनेछ ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर सरकार गठन गर्न नचाहेको बताएका छन् ।शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पादकहरुको अन्तक्रियामा बोल्दै उनले बजेटको चाप र विश्वासको मत नपाउने भएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्रवान गरेको बताए ।
उनले भने,‘संसद छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको होइन,बजेटको चाप र विश्वासको मत नपाउने भएर हो ।’
‘विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो । फेरि जाने संविधानको धारा ५ कै प्रकृयामा हो । त्यसो भइसकेपछि हामीले जेठ १५ गते संसवधानमै तोकेको छ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नीति कार्याक्रम प्र्रस्तुत गर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नयाँ सरकार बन्नलाई १४ गते सरकार बन्यो भने १५ गते बजेट कसरी पेश गर्ला रु आफना नीतितथा कार्यक्रमहरु कसरी तर्जुमा गर्ला रु हामी सँग समय धेरै छैन ।प्रधानमन्त्री ओलीले भने
समय अभावका कारण विश्वासको मत लिएर बजेट प्रस्तुत गर्न समस्या भएको उनले बताएका छन ।
‘आज ७ गते भइसक्यो त्यसकारण हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गरेर फेरि विश्वासको मत लिन नसकेर पराजित भएर धारा ५ मा गइन भने समयको सुविधा हामीलाई छैन । ५ मै जान भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठन गर्ने मार्गदर्शनको बाटो खोलिदिनु समयको चापको हिसाबले उचित मात्र होइन त्यो अपरिहार्य भइसक्यो । तर्सथ अर्को सरकार बनोस् भनेर वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर नयाँ सरकारको लागि आह्वान गरेको हो ।
Previous: विपक्षी गठबन्धनले दियो माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर
Next: सधै गोरू पड्काउने,हलो अड्काउने ? : प्रधानमन्त्री ओली